China Umgangatho ophantsi I-PCB yezonyango ye-PCB yabenzi kunye nabathengisi | Kangna
I-SMT sisifinyezo seTekhnoloji ePhambili yokuPhezulu, eyonaTekhnoloji idumileyo kunye nenkqubo kwishishini lendibano ye-elektroniki. Isekethe yeKhompyuter yeTekhnoloji yeNtaba yeNtaba (SMT) ibizwa ngokuba yiSurface Mount okanye iTurface Mount Technology. Luhlobo lwetekhnoloji yendibano yesekethe efakela izinto ezingenamkhokeli okanye ezifutshane zecandelo lendibano (i-SMC / SMD ngesiTshayina) kumphezulu weBhodi yeSekethe eprintiweyo (i-PCB) okanye omnye umhlaba we-substrate, emva koko i-welds kwaye ihlangana ngendlela yokuhambisa kwakhona nkxu welding.
Ngokubanzi, iimveliso zekhompyuter esizisebenzisayo zenziwe nge-PCB kunye nee-capacitors ezahlukeneyo, izixhobo zokumelana nezinye izinto zombane ngokomzobo wesekethe, ke zonke iintlobo zezixhobo zombane zifuna itekhnoloji yokuqhubekeka ye-chip ye-SMT.
Inkqubo esisiseko ye-SMT ibandakanya: ukushicilelwa kwescreen (okanye ukuhambisa), ukunyusa (ukunyanga), ukuwelda kwakhona, ukucoca, ukuvavanya, ukulungisa.
1.Ukuprintwa kwescreen: Umsebenzi wokuprinta kwesikrini kukuvuza ukunamathisela i-solder okanye isambatho sokuncamathelisa kwiphedi ye-PCB ye-solder ukulungiselela ukuwelda kwezinto. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ngumatshini wokuprinta kwescreen (umatshini wokushicilela wescreen), ebekwe ngaphambili kumgca wemveliso ye-SMT.
2. Glue ukutshiza: Iwisa iglu kwindawo emiselweyo yebhodi ye-PCB, kwaye owona msebenzi wayo ukulungisa izinto kwibhodi ye-PCB. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ngumatshini wokuhambisa, ubekwe ngaphambili komgca wemveliso ye-SMT okanye ngasemva kwesixhobo sovavanyo.
3. Mount: Umsebenzi wayo ukufaka iindawo ibandla indibano ngokuchanekileyo kwindawo esisigxina PCB. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ngumatshini wokubekwa kwe-SMT, obekwe ngasemva komatshini wokushicilela kwiscreen kwimveliso ye-SMT.
Ukunyanga: Umsebenzi wayo kukunyibilikisa i-SMT yokuncamathela ukuze izinto zebandla elingaphezulu kunye nebhodi yePCB zinamathele ngokuqinileyo kunye. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ziphilisa isithando somlilo, esingasemva komgca wemveliso ye-SMT SMT.
5. Reflow welding: umsebenzi reflow iwelding ukuba ukunyibilika le solder intlama, ukuze izinto umphezulu ibandla kunye nebhodi PCB ngokuqinileyo ncamathelana. Izixhobo ezisetyenzisiweyo kukuhlaziya isithando somlilo, esikumgca wemveliso ye-SMT ngasemva komatshini wokubekwa kwe-SMT.
6. Ukucoca: Umsebenzi kukususa intsalela ye-welding efana nokuhamba kwi-PCB ehlanganisiweyo eyingozi emzimbeni womntu. Izixhobo ezisetyenzisiweyo ngumatshini wokucoca, indawo ayinakulungiswa, ingaba kwi-Intanethi, okanye hayi kwi-intanethi.
7. Ukuchonga: Isetyenziselwa ukukhangela umgangatho we-welding kunye nomgangatho webandla we-PCB ehlanganisiweyo. Izixhobo ezisetyenzisiweyo zibandakanya ukukhulisa iglasi, imicroscope, isixhobo sokuvavanya i-on-line (ICT), isixhobo sovavanyo lwenaliti esibhabha, uvavanyo oluzenzekelayo lwe-optical (AOI), inkqubo yovavanyo lwe-X-ray, isixhobo sovavanyo olusebenzayo, njl njl. Inxalenye yomgca wemveliso ngokweemfuno zovavanyo.
8.Ukulungisa: isetyenziselwa ukwenza kwakhona i-PCB ebhaqwe ngeempazamo. Izixhobo ezisetyenzisiweyo zi-ironing iron, iindawo zokusebenzela zokulungisa, njl.njl. Naphi na kumgca wokuvelisa.
Egqithileyo Ukucwiliswa kwebhodi yegolide esekwe kwibhola enye
Okulandelayo: ukujika okukhawulezayo komzekelo wegolide we-PCB kunye ne-Counter hole hole